राजेन्द्र खड्कीको खुलासा- ‘अब धेरै बाँच्दिन भन्ने थाहा पाएर श्रीकृष्णले श्वेतालाई “२ करोड दिन्छु अर्कै सङ बिहे गर भनेका थिए” (भिडियो हे्र्नु’होस)
Homeसमाचारराजेन्द्र खड्कीको खुलासा- ‘अब धेरै बाँच्दिन भन्ने थाहा पाएर श्रीकृष्णले श्वेतालाई “२ करोड दिन्छु अर्कै सङ बिहे गर भनेका थिए” (भिडियो हे्र्नु’होस)
February 13, 2021 admin समाचार 6393
द्धन्द्ध निर्देशक राजेन्द्र खड्की स्प’ष्ट वक्ता हुन् । उनी निडर तरिकाले आफ्ना कुरा खुल’स्त राख्छन् । उनले धेरै कलाकारका पोल पनि खोलिदिन्छन् । केही समय अघि उनले महानायक राजेश हमालको पनि पोल खो’लिदिएका थिए । राजेश हमालको एक जना विदेशी गर्लफ्रेण्डलाई हमालले कमाल समतेर घुमाएको घट’ना उनले सार्वजनिक गरिदिएका थिए । अहिले चर्चामा रहेकी श्वेता खड्काको पनि उनले केही नयाँ कुरा खु’लाएका छन् ।
उनी निकै पुराना द्ध’न्द्ध निर्देशक हुन् । उनीसंग काम नगरेका कलाकार सायदै होलान् । उनले श्वेतालाई पनि फि’ल्ममा खेलाएका छन् । त्यसैले उनलाई पनि राम्रोसंग जान्दछन् । साथै नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठ उनका पृय साथी थिए । उनले श्रीकृष्णको फिल्ममा श्वेतालाई ए’क्सन रोल सिकाएको कुरा स्मरण गर्दै उनले दुई जनाबीचको सम्बन्धका बारेमा बोलेका छन् । उनले श्वेतालाई श्रीकृष्णले श्राप दिएको टिप्प’णी गरे ।
श्रीकृष्ण श्रेष्ठको निधन भएपछि आफुले श्वेतालाई वि’वाह नगर भनेर सल्लाह दिएको बताएका छन् । तर श्वेताले विवाह गरेकोमा उनलाई चित्त बुझेको छैन । उनले श्वेता देखा’वटीमा गएको र विवाह निकै भब्य तरिकाले गरेका सबैको आँखामा परेको बताए । श्रीकृष्णले आफुलाई आफ्नो निध’नको शंकेत त्यतीबेलै गरेको र श्वेतालाई म २ करोड दिन्छु श्वेतालाई अरुसंग विवाह गर्न भनेर सम्झा’इदिउ भनेर भनेको स्मरण गरेका छन् ।
त्यतीबेला नै श्रीकष्णले आफुलाई भनेको कुरा श्वेतालाई भन्दा श्वेता नबो’लेको पनि बताएका छन् । उनले श्वेताले दोस्रो विवाह गर्दा आफु सहभागी हुन नगएको पनि बताए । उनले श्रीकृष्णको ना’मवाट श्वेता परिचित भएकाले उनकै नामवाट सुरु गरेको माझी वस्ती निर्माणको काम पुरा गर्न पनि सु’झाव दिएका छन् । – इताजा खबरबाट
सत्यमोहन जोशी दम्पतीले मृ’त्युपछि शरीर दान दिने गरे घोषणा (भिडियाे सहित)
बिनोद र अनिताको रुदा रुदै सकियो अन्तरबार्ता,अनिता हिड्न थालेपछि परे सबै च’कित(भिडियो सहित)
April 1, 2021 admin समाचार 6251
आजबाट फेरि बढ्यो ग्यास, डिजेल र पेट्रोलको भाउ, प्रतिलीटर कति ?
April 6, 2022 admin समाचार 1224
नेपाल आयल निगमले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाएको छ। निगम संचालक समितिको मंगलबार बसेको बैठकले आजै राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको हो । यससँगै काठमाडौं लगायत सम्पूर्ण डिपो तथा विक्री बिन्दुबाट
June 11, 2021 admin समाचार 5427
नेपालमा कसैको छोरा या छोरिले बिदे’शमा पढ्छ वा अध्ययन गर्छ भन्ने बित्तिकै त्यो बि’द्यार्थी र परिवारकै रवाफ अलग्गै देखिन्छ ।तर नेपालमै नेपाली बिद्यार्थीलाई पढाउन बिदेशबाट नै शि’क्षिका नेपाल आउछन् त्यो पनि एक गाउको सर’कारि बिद्यालयमा
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (243691)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (231249)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (230978)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (228101)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (227612)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (195574)